Amahora okulala athintekile ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ingabe unenkinga yokulala? Imbangela eyodwa kungaba ukushintsha kwesimo sezulu, njengoba kuvezwe ocwaningweni oluholwa nguNick Obradovich waseHarvard University olushicilelwe kuScience Advances.
Futhi-ke, ngubani ongakutholi kanzima ukulala lapho izinga lokushisa liphakeme kakhulu?
Umuntu omdala ophile kahle kufanele alale amahora ayisithupha, ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili; uma ulala kancane, kungenzeka uvuke ngosuku olulandelayo ukhathele futhi mhlawumbe ucasulwe ukungalali. Kepha akulula ukuphumula lapho i-thermometer ebusuku ifunda, isibonelo, 28ºC. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi abangaphezu koyedwa nabangaphezu kwababili balale emini, kodwa hhayi endaweni yangakini kuphela, kodwa nakuyo yonke iplanethi.
U-Obradovich nethimba lakhe babhala ubudlelwano phakathi kwamazinga okushisa anyukayo nokungalali kahle. Lapho uqhathanisa izimpendulo ngokulala namazinga okushisa endawo, bathole ukuthi ehlobo kubiza ukulala okuphindwe kathathu kunanoma iyiphi enye inkathi yonyaka.
Lapho nje ubudlelwane obuphakathi kokulala nokushisa busunguliwe, basebenzise ukuqagela kwesivuvujikelele ukubona ukuthi izinkinga zokulala zizoba zimbi kanjani engxenyeni yesibili yekhulu, ikakhulukazi kubantu abadala nabampofu. Usosayensi uSolomon Hsiang, wase-University of California, eBerkeley, uchaze ukuthi lapho senza amaphutha amakhulu, njengalapho kwenziwa izinqumo ezingezinhle zomsebenzi, ngokwesibonelo, lokho kusithinta ngendlela yokuthi kungasivumeli ukuba silale kahle.
Sonke sidinga ukulala kahle ebusuku, ngakho »ukuguqulwa kwesimo sezulu izinsuku eziningi ngenyanga kuzokhipha izindleko zangempela futhi ezibalulekile okufanele sizicabangele». Ngakho-ke, kuyabonakala ukuthi, njengoba uMhlaba ufudumala, kuzofanele sishintshe kancane kancane ezinye zezinto zethu zansuku zonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Amahora okulala athintekile ukuguquka kwesimo sezulu
Umphumela we `` heat island '' uzophinda kabili izindleko zasemadolobheni zokushintsha kwesimo sezulu